Vatsin’Ankohonana : mahazo tombony ireo distrika enina | NewsMada
Vatsin’Ankohonana : mahazo tombony ireo distrika enina
Notanterahina tany amin’ny fokontany Mahavelona, Foulpointe omaly ny andiany faharoa amin’ilay tetikasan’ny fanjakana Vatsin’Ankohonana.Vatsian’ny banky iraisam-pirenena vola ity tetikasa ity ary tantanan’ny FID.
Nahazo tombontsoa amin’ity tetikasa ity ny distrika enina ao anatin’ny faritra dimy. Maherin’ny 3.600 ireo olona mahazo tombony mivantana amin’izany. Tanjona kendrena amin’ity tetikasa ity ny hanentanana ny ankohonana hampiditra an-tsekoly ny zanany.
Omena vola sahaza ilay tokantrano izay efa voasivana fa tena sahirana kanefa afaka hivoatra mba hahafahany mampianatra ny zanany sy mamelona azy. Mitaky vokatra anefa ny mpanara-maso ny tetikasa ka miankina amin’ny fahazotoan’ny mpianatra mianatra sy ny naotiny any am-pianarana no hitohizan’ny famatsiana na tsia.
Nilaza ny solontenan’ny Banky iraisam-pirenena, Coralie Gevers fa manantena ny fahombiazan’ny governemanta eo amin’ny fanaraha-maso ity tetikasa ity izy ireo. Tafiditra ao anatin’ny ady atao amin’ny fahantrana ity tetikasa ity.
Nanao rodobe tany Mahavelona Foulpointe avokoa ny ankamaroan’ny minisitra mpikambana ao amin’ny governemanta omaly niaraka tamin’ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery. Samy nandray izay tandrify azy amin’ny asa tokony hatao any an-toerana izy ireo tamin’izany.
Anisan’izany ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena izay nanolotra ny taratasy ho an’ireo mpampianatra Fram noraisina ho mpiasam-panjakana. Teo koa ny minisitry ny Asa vaventy izay nanankinana ny fanamboarana ny lalana any an-toerana izay efa hotohoto ankehitriny.